ọhịa Toro | Top Slot Site | Mobile & Online £5 FREE | £€$800 Bonus :)
The Wild Toro Slots Bonus will immediately enliven up your mood with a very cartoon like set-up of a small town in Spain, e na-enweghị usoro enịm huts na ndị mmadụ na-agagharị gburugburu na ndabere nke ikiri ụkwụ. The isiokwu nke oghere dabeere na ehi-alụ ọgụ a na-ewu ewu egwuregwu nke Spain ebe a matador ọgụ na a nnukwu ehi. N'ihi ya, echiche dị otú ahụ na dị ka ọtụtụ ugboro na matador ejisie ike imeri ehi ma ọ bụ osote itughari, payouts ina atụkwasịkwara gị wallets. Muffled olu nke ndị mmadụ na-setịpụrụ na-akụ n'okirikiri na-enye gị a obi na-adị nke a ọrụ n'aka obodo.
Banyere Developer nke Wild Toro Ohere mepere
Elk nka bụ otu n'ime ndị na mmepe onye ka jisiri ka a akara ke Ịgba Cha Cha ụlọ ọrụ na egwuregwu dị ka Bloopers na Wild Toro ohere mpere. The Mmepụta butere n'olu afọ anọ azụ na-ọma nye 8 egwuregwu ruo ugbu. The ụlọ ọrụ na-aga inwe ọganihu na domain nnọọ anya na-achọ na àgwà nke gameplay ha na-enye.
The ịkụ nzọ nso dara n'etiti 0.20 na nke a online cha cha egwuregwu. The nnọchianya nke Wild Toro ohere mpere na-nnọọ pụrụ iche. I oroma sliced ​​na a mma na n'etiti, a rose, ihe ornate fan na-acha odo odo na agba na 3 dị iche iche mkpụrụ ego nke gold ọla-ọcha na ọla. Mgbe ahụ e nwere otu anụ ọhịa Toro akara dere weturu na-acha odo odo na agba enịm gafee ukwu ohere. The ikposa bụ iwe matador na obere afụ ọnụ. Mgbe ahụ e nwere, n'ezie, na-eje ije ọhịa nke egwuregwu nke bụ na-ewe iwe ehi nke nwere mpi na nnukwu ezé-achịkwa ọchị na ị. Roses ekwenyere ị karịa ogo uru nke 1,000 Ebe e si nweta sochiri a knifed oroma na 500 coins. Enwere 178 paylines iji merie.
The Wild akara anọchi ihe nile ma e wezụga nke ikposa ime emeri n'ịgwa gị. A payline na Wild akara obụrede mbụre nke kasị elu payout. The Wild Toro akara pụtara nanị na ise ukwu. The atụ eme dị ka a Ije ije Wild na-akpali ịgbasapụ gafee na onye ọ bụla atụ ogho. Dị ka ọ na-akwali, ọ na-agbanwe niile Matadors ka wilds wee emen dị ka Wild ke akpa ukwu. na- 3 Matadors na-esi anwụde nke abụọ, atọ, na nke anọ na-esi anwụde akụkọ ihe a free re-atụ ogho. The Matadors arapara n'ebe ha na extra spins abịa dị ka onye ọzọ Matador-egosi na-esi anwụde.
Wild Toro ohere mpere bụ ihe ịtụnanya online cha cha egwuregwu egwuregwu ndị dị nnọọ chọrọ laze gburugburu na cha cha oghere, na achọghị na-egwu a ize ndụ otu. elk nka, Mmepụta n'ezie masịrị ya na gameplay na oghere.